Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || केन्द्रीय अस्पताल आयो, बजेट आएन – kayakairan.com
केन्द्रीय अस्पताल आयो, बजेट आएन
मेसु भन्छन्, “विना दक्षिणाको पुजारी भयौँ”
भरतपुर, २६ चैत
भरतपुर अस्पताल विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पतालका रुपमा संघीय सरकार मातहतमा छ । केन्द्रीय अस्पतालको मान्यता पाएपनि प्रयाप्त बजेट नहुदा अस्पताल समस्यामा परेको छ । अस्पतालको ५६ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, “केन्द्रीय अस्पतालको लोगो त पायौँ, तर बजेट पाएनौँ ।” विना दक्षिणाको पुजारी जस्तो अस्पताल बनेको दुखेसो सुनाए । माघदेखि सरकारी कर्मचारीले तलब समेत नपाएको बताए । “अस्पताल विकासको बजेट नआउदा ममर्त गर्न, उपकरण खरिद गर्न समस्या परेको छ”, उनले भने, “नयाँ सेवा सुरु गर्न समेत बजेटनै कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।”
उनले स्वास्थ्य विमाको कार्यक्रम सरकारी अस्पतालमा हस्तान्तरण भएपनि जनशक्ति, पूर्वाधार अभावमा सेवा दिन कठिन भैरहेको बताए । “सेवाग्राही आक्रोशित छन्, जनशक्ति, प्रविधि र उपकरण उहीनै छ”, उनले भने, “स्वास्थ्य विमाको कार्ड वितरण भैरहेको छ, गुणस्तरीय सेवा दिन अप्ठ्यारो भैरहेको छ ।” उनले भरतपुर अस्पताललाई सरकारी मेडिकल कलेजका रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । “प्रतिस्पर्धा र दक्षताका आधारमा मेरिटका आधारमा पढ्ने कलेज बनाउन सबैको सहयोग चाहिएको छ”, उनले भने, “१ प्रदेश १ सरकारी मेडिकल कलेज अवधारणा अनुसार भरतपुर अस्पताललाई रुपान्तरण गरिनुपर्छ ।”
उनले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मुख्य कार्यालय र अस्पताल बनाउन सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराए । घण्टौ लाइन बसेर टिकट काट्ने प्रणाली सुधार्न अनलाइन टिकटको व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । “बैशाखबाट अनलाइन टिकट सेवा सुरु हुनेछ”, उनले भने, “अस्पतालको वेभसाइटमा टिकटको फर्म भर्ने, अनि ओपिडीबाट सिधै टिकट लिने व्यवस्था मिलाउदैछौँ, यसले भीड व्यवस्थापन गर्नेछ ।” उनले मेडिकल र अर्थोपेडिक्स विभागमा टोकन प्रणाली कायम भैसकेको बताउँदै छिटै सबै विभागमा टोकन प्रणाली कायम गरिने बताए । वीर अस्पतालपछि सबैभन्दा धेरै शैया भएको अस्पताल भएकाले गुणस्तर विकासका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।
जग्गाबारे कोही मौन, कोही गर्जिए
भरतपुर अस्पताल ३१ विघाको धनि थियो । हाल १० विघा छ । “हाम्रा वरीपरी अरु जमिनदार आएर होच्याइरहेका छन्”, मेसु पौडेलले भने, “योबारे सबै जानकारनै छौँ, सिटिइभीटी र स्वास्थ्य कार्यालयलाई पहिला दिएको जग्गाा मागेका छौँ ।” जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले पुरानो मेडिकल कलेजसँगको सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । “भाडा वृद्धि हेर्दा ८ लाख घाटा देखिन्छ, सम्झौताले यो अस्पताललाई हित गर्दैन”, उनले भने, “भाडा नदिने अस्पताललाई तालाबन्द गर्नुपर्छ, जनप्रतिनिधि जानुपर्छ, जग्गामा रजाई गर्न मिल्दैन ।” प्रतिनिधिसभा सदस्य उमा रेग्मीले गुमेका जग्गा फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्ने बताइन् ।
“भाडा नतिर्ने दादागिरी देखिएका छन्”, उनले भनिन्, “वरिपरीका जग्गा फिर्ता गर्न हिम्मत गर्नुपर्छ, बलियो सरकारले खुट्टा कमाउनुहुदैन ।” उनले पुरानो मेडिकल कलेजसँगको भाडा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताइन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेल भने खासै बालेनन् । “औलो उन्मूलन गर्ने केन्द्रका रुपमा आएको यो अस्पताल केन्द्रीय अस्पताल बन्यो”, उनले भने, “परिणाम देखाउने डाक्टर, नर्सले नै हो, यहाँबाट धेरै सेवा दिइएका छन् ।” उनले नमूना मेडिकल कलेज बनाउन लागिपर्ने बताए । “भाडा ४३ लाख बुझाएको भन्ने सुनेको छु”, उनले भने, “सम्झौता अनुसारको भाडा बुझाउनैपर्छ, कानुन माथि कोहि छैन ।” कानुनमा सबै नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसअनुसार काम गर्नुपर्ने समय आएको बताए । कांग्रेस चितवनका सचिव उत्तम जोशीले अस्पतालका पुराना जग्गा अस्पताललेनै उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । नेकपा चितवनका नेता तेजेन्द्रबहादुर खड्काले प्रभाइभेट अस्पताल धाउन हतार गर्ने परिपाटी हटाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेत, निमित्त मेट्रोन रमिला विष्ट, डा. विजयप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रेमकुमार श्रेष्ठ, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष प्रेम भुजेल लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । प्रत्येक वर्ष अस्पतालले प्रकाशन गर्ने स्मारिककाको विमोचन समेत गरिएको थियो । कार्यक्रम अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खिमलाल भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको थियो ।